Welldone Electronics Ltd. inopa akawanda mabhenefiti kune vatengi vedu ayo anoda kugovaniswa kweruzivo rwepachivande kubva kune vatengi vedu. Welldone Electronics Ltd. inotora matanho ese ekuchengetedza matanho ekuchengetedza vatengi vedu.
Mashandisiro atinoita uye kushandisa ruzivo rwako
Ruzivo iwe rwaunopa kana uchinyoresa kushandisa uye mukufamba kwekushandisa webhusaiti yedu rinogona kushandiswa nesu:
Nezvinangwa zvekushandisa kwako webhusaiti yedu, kusanganisira kutaura newe maererano nechero mubvunzo wawakasimudza;
Kuti tikubate iwe zvichizotevera kukuzivisa nezve zvimwe zviziviso, zvakakosha zvipo, zvigadzirwa, masevhisi kana zviitiko zvinopihwa kubva kuWelldone Electronics Ltd., vanobatana navo, uye vamwe vechitatu-bato bhizinesi vatinotarisana navo vatinofunga vanogona kunge vachikufarira. Tichagara tichikupa iwe sarudzo yekuti usabatwe nenzira iyi kana zvachose uye unogona kushandisa sarudzo iyoyo chero nguva.
Nezve zvinangwa zvehutungamiriri kana kutibatsira isu kuvandudza nekuvandudza kwedu kupa;
Zvekudzivirira mhosva kana kuona.
Kuendesa ruzivo kuburikidza neinternet hakuwanzo kuve kwakachengeteka zvachose. Hatigone kuvimbisa kuchengetedzeka kwedata rako rinotumirwa kusaiti yedu; chero kufambiswa kuri panjodzi yako wega. Kana tangogamuchira ruzivo rwako, tinoshandisa zvinhu zvekuchengetedza kuyedza kudzivirira kuwana kusabvumidzwa.
Kana iwe usisiri kuda kugamuchira kushambadzira kweKambani, unogona "kusarudza" kuvagamuchira nekutevera rairo dzakabatanidzwa mukutaurirana kwese kana nekutumira email Kambani ku welldone@welldonepcb.com